Jamaahiirta Kubbada Cagta Oo Ka Falceliyay In Kulanka Manchester Derby Loo Magacaabay Garsoore Uu Gurigiisu 6 Mayl U Jiro Old Trafford Iyo Dareenka Laga Bixiyay. - GOOL24.NET
Jamaahiirta Kubbada Cagta Oo Ka Falceliyay In Kulanka Manchester Derby Loo Magacaabay Garsoore Uu Gurigiisu 6 Mayl U Jiro Old Trafford Iyo Dareenka Laga Bixiyay.
Markii ugu horaysay waxaa kulanka Manchester Derby dhex dhexaadin doona garsoore ka ka soo jeeda isla magaalada Manchester iyada oo waliba la ogyahay in garsoorka Premier league si xoogan looga ilaaliyo in ay qabtaan kooxo ay taageerayaal u yihiin bale garsoore Anthony Taylor oo gurigiisu 6 mayl oo kaliya u jiro Old Trafford ayaa markii ugu horaysay qaban doona kulanka Man City iyo Man United.
Sidii aanu horeba idiinku soo gudbinay sharciga garsoorka Premier League ayaa dhigaya in maalinta kowaad uu garsoore shaqa ka soo doonto Premier league in garsoore kastaaba uu xaqiijiyo kooxda uu taageero si looga hortago in uu qabto koox uu taageere u yahay taas oo cadaalad daro looga cabsan karo.
Laakiin waxaa dad badan oo kubbada cagta aduunka ah u cuntami wayday in garsoore Anthony Taylor oo lix mayl oo kaliya u jira garoonka Manchester United ee Old Trafford loo doortay in uu qabto kulanka xamaasada badan ee Manchester Derby.
Inkasta oo taageerayaasha kubbada cagta loo cadeeyay in garsoore Anthony Taylor aanu taageerin kooxda Manchester United isla markaana uu qortay in uu taageere u yahay kooxda yar ee Altrincham FC waxay taasi ka dhaadhici kari wayday taageerayaasha kubbada cagta gaar ahaan kuwa Manchester City oo cadhadooda banaanka soo dhigay.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo koobaynaa falcelintii jamaahiirta kubbada cagtu ka bixiyeen isla qoraalkii maamulka premier league ay ku shaaciyeen in garsoore Anthony Taylor uu qaban doono kulanka Man United iyo Man City halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
Taageer ay Bart ugu qoran tahay oo fariintan maamulka Premier league kula hadlaya ayaa soo qoray: “Sideed u awoodeen in aad kulan Derby ah u magacawdaan garsoore marka aad ogtihii in uu taageer u yahay kooxda martida ah?”. Wuxuuna ula jeedaa in Man United uu taageere u yahay.
John Roberts oo isla fikradan qaba ayaa soo qoray: ” Taageere Man United ah ayaa loo magacaabay garsooraha Manchester Derby!. Wow sideed u samayn kartaa!”.
Derrin oo isla fikrada hore si xoogan uga hadlaya ayaa Premier league u soo qoray: “Isagu waa taageere United ah qof kastaaba wuu ogyahay. Maxay tahay sababta isaga loo siiyay kulankan marka uu isagu taariikh ahaan u leeyahay in uu City kulamada ka saaro?”.
Taageere kale oo CFC ay ugu qoran tahay ayaa heer kale arinta u qaaday wuxuuna Premier league u soo qoray fariinta ah: “Waxaan Premier league ugu yeedhayaa horyaalka beeroolayaasha. Marka la Liga la joogo, Real Madrid waxay kaalinta ugu hoosaysa ku jiri kartaa January walina waxay ku dhamaysan kartaa afarta sare”.
Paul PD ayaa dhinac kale arinta ka fiiriyay wuxuuna soo qoray: “Sideed u awoodaan in aad magacowdaan nin taageere u ah United oo ay qoyskiisu yihiin kuwo tikidhada halkaas ee xili ciyaareedka haysta” Waana xaqiiq jirta in qoyska Anthony Taylor oo dhami ay Man United taageeraan oo ay tikidhka xili ciyaareedka United haystaaan balse aanu isagu taageer u ahayn United.
Mid kale oo ay ugu qoran tahay Augusto ayaa dib u xusuustay garsoore waqti dheer Man United lagu xaman jiray wuxuuna soo qoray: ” Laga ayaabee in ay sidoo akle dib ugu yeedhaan Howard Webb. Oh aan sugno”.
Waxaajira taageerayaal aan ahayn kuwa Manchester City oo xataa qiray in ay qalad tahay in garsoore qoyskiisu yihiin kuwa Manchester United sida buuxda u taageera ee tikidhada xili ciyaareedka haysta in loo dhiibo kulankan Manchester Derby.
Fariimaha ayaan ahayn kuwo qoraal lagu soo koobi karo waxaana maamulka Premier league si xoogan loogu eedeeyay in ay qalad ku lahaayeen in garsoore Manchester United lagu tuhmayo loo magacaabo kulan u wayn sida Manchester Derby.